Netflix တွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သောအကောင်းဆုံး '80s ရုပ်ရှင် - Netflix ရုပ်ရှင်
ယခုအချိန်တွင် Netflix ရှိအကောင်းဆုံး '၈၀ ရုပ်ရှင် (၂၀၂၀)
Best 80s Movies Netflix Right Now
အင်ဒီယားနားဂျုန်းစ်နှင့်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲလေးဆုရရှိသည့်ပျောက်ဆုံးသွားသောသေတ္တာ၏ Raiders ရှိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ Indy (Harrison Ford) နှင့်သူ၏အင်အားကြီးသောမီးလျှံဟောင်း Marion Ravenwood (Karen Allen) တို့သည်ထောင်ချောက်ထောင်ချောက်များကိုရှောင်။ နာဇီများကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းခြင်းနှင့်ပakesိညာဉ်သေတ္တာ၏ထူးဆန်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေမှုတွင်မြွေများကိုမြဲမြဲမြဲမြဲကြည့်နေကြသည်။ Indiana Jones နှင့်အတူစွန့်စားခန်းတစ်ခုကိုသင်တွေ့သောအခါစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့် cliffhanger တစ်ခုနောက်တစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။ အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်နှင့်ပျောက်ဆုံးသွားသောသေတ္တာ၏ Raiders သည် CMS သည်မေလတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းတွင်ထုတ်လွှင့်မည့် Paramount Pictures စာကြည့်တိုက်မှအထင်ကရနှင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသောရုပ်ရှင်ကားငါးခုတွင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်နှင့်ပျောက်သောသေတ္တာ၏ Raiders များသည်မေလ ၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ (၈း၀၀-၁၁း၀၀ နာရီ၊ ET / PT) တွင်လွှင့်သည်။ © Paramount All Rights Reserved
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ရာသီ ၂ ရက်ဖြစ်သည်၊ ငါ Ending အရာများဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ, သွန်း, အနှစ်ချုပ်, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်ပိုပြီးစဉ်းစားတယ်
၁။ Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ်နှင့်ပျောက်သောသေတ္တာ၏ Raiders
ငါ့ကိုအမှားမယူနဲ့ Harrison Ford Han Solo ကဲ့သို့ကြီးလှသော်လည်း၊ အင်ဒီယားနားဂျုံးစ် ရုပ်ရှင်စီးရီးကွဲပြားခြားနားတာမျိုး။ အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်သည်စွန့်စားစွန့်စားသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏ကြမ်းတမ်းသည့် Safari ရုပ်သည်ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ သူသည်မြွေများစွဲနေသော်လည်းအခက်အခဲများကြုံရချိန်တွင်အင်ဒီသည်အမြဲတမ်းမကြောက်မရွံ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ်နှင့်ပျောက်သောသေတ္တာ၏ Raiders ငါဂိမ်းထဲမှာငါအကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မကြောက်! အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်နှင့်ပျက်စီးခြင်းဗိမာန်တော်၊ အင်ဒီယာနာဂျုံးစ်နှင့်နောက်ဆုံးခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ နှင့် အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်နှင့် Crystal ဦး ခေါင်းခွံ၏နိုင်ငံတော် Netflix မှာလည်းရှိပါတယ်။
ကရာတေးကလေး ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူဟာအစွန်းရောက်ဂန္ထဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သည် Ralph Macchio ကို Daniel LaRusso နှင့် Pat Morita က Mi Miagi အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ တီ
သူကရာတေး Kid အရေးအသား၊ တေးဂီတနှင့်တေးဂီတကိုချီးကျူးခဲ့သည်။
နင် Dustin ဟော့ဖ်မန်းသည်သူ၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူသည် Michael Dorsey အမည်ရှိအမြင့်ဆုံးသရုပ်ဆောင်မင်းသားဖြစ်သည်။ သူဟာထူးချွန်ထက်မြက်သူဖြစ်ပေမယ့်သူ့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့သဘောထားကြောင့်ဘယ်သူမှသူနဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ရရန်အပူတပြင်းကြိုးပမ်းမှုတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အယောင်ဆောင်ကာဒေါ်ရသီမိုက်ကယ်ကဲ့သို့စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။
သူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမိုက်ကယ်ဟာဆက်တိုက်ဆက်သွားနေ ဦး မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုရည်ညွှန်းတဲ့တစ်တန်ရှိပါတယ် နင် မျက်မှောက်ခေတ်ရုပ်ရှင်များနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များတွင်ကြည့်ရှုပါ၊ ထို့ကြောင့်ယင်းကိုကြည့်ခြင်းသည်သင်၌တစ်ခါမျှမရှိဖူးသောအရာများကိုသတိပြုမိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အာကာသဘောလုံး မူရင်းတစ်ပျက်လုံးများဖြစ်ပါတယ် Star Wars သုံးဆူ။ ၎င်းကိုအနွေးဓာတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများဖြင့်အစပြုခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အစွန်းရောက်သည့်ဂန္ထဝင်ဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံဝတ္ထုပရိတ်သတ်များသည်ဤကမ္ဘာလောကရှိဟာသကိုမချစ်နိုင်ပါ။
1979 ဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံသည် အဆိုပါ Neverending ပုံပြင် Michael Ende မှဤဂျာမန်စိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြင်ပတွင်ထုတ်လုပ်သည့်အချိန်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောစျေးအကြီးဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
The NeverEnding ပုံပြင် Fantasia ၏အံ့ဖွယ်ကမ္ဘာကြီးကိုဖုံးလွှမ်းနေသည့် Nothing, မှောင်မိုက်သောစွမ်းအားကိုရပ်တန့်ရန်တာဝန်ပေးထားသောလူငယ်စစ်သည်တစ် ဦး အကြောင်းပြောပြသည့်မှော်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်သောကောင်လေးတစ်ယောက်၏ပုံပြင်ကိုရာဇဝင်များကဖော်ပြသည်။
ဒီသဘာဝလွန်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရုပ်ရှင်ကကောလိပ်ကျောင်းသားငါးယောက်ကိုအဓိကထားပြီးပြဇာတ်တပုဒ်ကိုတီးခတ်တဲ့အခါနတ်ဆိုးများနှင့် ၀ ိညာဉ်များထုတ်လွှတ်သည်။ နတ်ဆိုးများပျံ့နှံ့နေသည်နှင့်အမျှအုပ်စုထဲမှတစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်မထားသောအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး သည်ရရှိလာသောအကြမ်းဖက်မှုများကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရန်တိုက်လှန်ရမည်။
7. ဖို့အတွက် Titans တွေက၏တိုက်ပွဲ
ဖို့အတွက် Titans တွေက၏တိုက်ပွဲ ထိထိရောက်ရောက်မပါရှိခြင်း၏ဂရိဒဏ္myာရီအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Harry Hamlin၊ Judi Bowker၊ Burgess Meredith, Maggie Smith နဲ့ Laurence Olivier တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်၏ 3D ဇာတ်ကားကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်းသင်မူရင်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ကလေးကစားခြင်း သာမန်ရုပ်သေးရုပ်တစ်ရုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ကပ်နေသည့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောလူသတ်သမားဖြစ်သော Chucky ကိုပြသသည့်ပထမဆုံးအရစ်ကျပေးခံရခြင်းမှာထူးခြားသောဂုဏ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ မုဆိုးမအမေကသူ့သားကိုမွေးနေ့အတွက်အရုပ်ပေးတဲ့အခါပရမ်းပတာဖြစ်လာတယ်။ သငျသညျထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်၏ပရိသတ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်မြင်ရပါတယ် ကလေးကစားခြင်း !
သွေးထွက်သံယို ယူအက်စ်ကြည်းတပ်ဗိုလ်ကြီးဖရန့်ဒွတ်စ်၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည့်ကိုယ်ခံပညာလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ ninjutsu အနုပညာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးရုပ်ရှင် Dux ရဲ့ Kumite, Hong Kong ရှိတရားမဝင်ကိုယ်ခံပညာပြိုင်ပွဲသို့သွားသည်။ သွေးထွက်သံယို Jean-Claude Van Damme ရဲ့ပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင်အဖြစ်ငွေတောင်းခံ အဝတ်အချည်းနှီးသေနတ်: ရဲတပ်ဖွဲ့၏ဖိုင်များမှ! ဤရုပ်ရှင်တွင်လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားသော slapstick ဟာသအပြင်အမြင်နှင့်နှုတ်ခမ်းသားများစွာပါ ၀ င်သည်။ ရုပ်ရှင်သည် Leslie Nielsen အားရဲတပ်ဖွဲ့မှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော Frank Drebin၊ Priscilla Presley, Ricardo Montalbán, George Kennedy နှင့် O. J. Simpson တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ဒီရုပ်ရှင်မှာနောက်ဆက်တွဲနှစ်ခုရှိပါတယ်။ အဆိုပါအဝတ်အချည်းစည်း Gun21 & frasl2: ကြောက်စိတ်၏အနံ့ နှင့် အဝတ်အချည်းစည်း Gun 1 1 & frasl3: နောက်ဆုံးစော်ကားမှု။
Bates Motel ဘယ်ညပါလဲ
အဘယ်သူသည် Jenna Fischer 2020 မှလက်ထပ်တာဖြစ်ပါတယ်
အမေရိကန်ထိတ်လန့်စရာဇာတ်လမ်းရာသီ ၈ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၉ နာရီအခမဲ့အွန်လိုင်း
sense8 ရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲ 8 ပြန်လည်စုစည်းမှု